Sharpspring: Waa Iibinta Dhamaystiran oo La Qiimeyn Karo iyo Suuqgeynta Qalabaynta Suuqgeynta | Martech Zone
SharpSpring wuxuu iskuxirayaa otomaatiga suuq geynta iyo CRM hal xal dhamaadka-dhamaadka ah oo loogu talagalay in lagu kobciyo ganacsigaaga. Mashruucooda hodanka ku ah muuqaalka waxay leeyihiin wax kasta oo aad u baahan tahay iyo in ka badan oo ku saabsan iibka gudaha & suuq-geynta suuqgeynta: emaylka ku saleysan habdhaqanka, raad raaca ololaha, bogagga degitaanka ee firfircoon, dhisaha baloogga, jadwalka warbaahinta bulshada, sheekooyinka caqliga leh, CRM & otomatiga iibka, qaab dhismeedka firfircoon, soo warbixinta iyo falanqaynta, Aqoonsiga Booqdaha ee aan la aqoon, iyo inbadan.
Mashruuca waxaa adeegsanaya SMBs iyo shirkadaha Enterprise, laakiin macaamiisha ra'iisul-wasaaraha SharpSpring waa wakaalado dijitaal ah maxaa yeelay waxay bixiyaan barnaamij iibiyaha / sumadda-calaamadeysan oo xarun faa'iido u noqotay in ka badan 1,200 hay'ado dijitaal ah oo adduunka ah. Waxay bixiyaan waxoogaa astaamo wakaalad ah, oo ay kujiraan is dhexgal la garan karo, maareyn macaamiil badan, hal saxiix, iyo inbadan.
Waxaan adeegsanay Act-On iyo HubSpot ka hor inta aan la aadin SharpSpring. Labada madal ee kale waa kuwa wanaagsan, laakiin SharpSpring wuxuu noo oggolaaday inaan si aad u badan ugu xakameyno macaamiisheenna xagga is-dhexgalka, biilasha, iyo qaabeynta qorshaha.
Raymond Cobb III, Kooxda Warbaahinta JB
Astaamaha SharpSpring Ku dar
Email - Jooji caajis, qaraxyo badan oo emayl ah, iyo inaad waqti ka dhigato istiraatiijiyadda suuqgeyntaada. Ku bilow wada hadallada u horseedaya beddelaad fariimo shaqsiyeed iyo ololeyaal otomatig ah oo ka jawaabaya dhaqanka isticmaalaha. U adeegso mashiinka suuqgeynta iimaylka 'SharpSpring' si aad ula socoto raadadka "gujinta ka dib." Si ka duwan shirkadaha kale ee emaylka u adeega, waxaan ku siineynaa falanqeyn faahfaahsan isdhexgal kasta - si aad ugu dirto farriinta saxda ah waqtiga saxda ah, una dir kooxdaada iibka ficil ficil ah ogeysiisyo waqtiga-dhabta ah.
Foomamka - Dhis, qaabee, oo dib u habbeyn ku samee beeraha si dadaal la'aan leh tifaftiraha jilicsan ee jiita-iyo-dhibicda. Foomamkayaga firfircoon ayaa qaabab is-buuxin ah u ah booqdayaasha la yaqaan si loo wanaajiyo beddelaadda isla markaana si weyn ugu muuqdaan goob kasta oo leh CSS caadadiisu tahay. Xitaa waad khariidayn kartaa beeraha foomka 3-aad iyo foomamka hooyo.
qalabaynta - Dhismaheena awooda badan, fududahay in la isticmaalo dhisme socodka muuqaalka ah wuxuu fududeynayaa otomaatiga suuq geynta. U adeegso caqli-galinta kala-goynta si aad uga qaybgasho hoggaamiyeyaasha meelaha muhiimka u ah safarkooda iibsashada gaarka ah. Si dhakhso leh ula falgal macluumaadka la-dhismeedka suuq-geynta suuq-geynta CRM. U diyaari shakhsiyaad wax iibsada badeecooyinkaaga iyo adeegyadaada, ka dibna u hoggaami shakhsiyaad shaqsiyadeed kala duwan si aad si toos ah ugu soo diri karto farriimo bartilmaameed ah. Hesho liistada maalinba maalinta ugu xiisaha badan waxay toos ugu hagaagaysaa sanduuqaaga, oo ku shaqee waqtiga saxda ah ee loogu beddelayo iibka. U adeegso qalabka qalabaynta suuqgeynta SharpSpring si aad u dhaliso natiijooyin ku saleysan kaqeybqaadasho, raad raaca bogga, taam, iyo in ka badan - xitaa waxay ku xiran yihiin burburka macdanta dabiiciga ah waqti ka dib.
Aqoonsiga booqdaha - VisitorID waa mid ka mid ah hubka qarsoodiga ah ee ku jira isugeynta qalabka otomaatiga suuqgeynta. U istcimaal inaad ku aqoonsato laba jibbaar inta booqdayaasha ah ee bartaada (marka la barbar dhigo tartamayaasha suuqgeynta tartamaya). Adeegso dabagal ku saleysan habdhaqan si aad si dhab ah u fahamtid waxa ku riixaya guji kasta. Aqoonso dhibcaha xanuunka iyo istiraatiijiyooyinka guuleysta si boggaagu uusan waligiis u istaagin ku habboonaanta. Hesho liistada tilmaamaha ugu kulul ee maalinta si toos ah ugu soo dhaca sanduuqaaga, oo ku dhaqan waqtiga saxda ah si loogu beddelo tilmaamahaas iibka.
CRM - Aqoontu waa awood - CRM-na waa iib. U adeegso qalabkeena suuqgeynta CRM ama si habsami leh ugu dhex dar bixiyaha CRM aad doorbideyso madal suuqgeynta SharpSpring. Hayso xog isku dhafan si aad u xawaareyso isdhaafsi laba dhinac ah oo deg deg ah. Lasoco fursadaha abuurka si aad uguxirto indhaha shimbir ee dhuumahaaga. Abuur marxalado heshiis gaar ah, beero, miirayaal, iyo inbadan, si aad ugu maamusho iibinta si dadaal la'aan qalabkeena otomaatiga suuqgeynta.
Goobaha Bogagga - Samee bogag degitaan xoog leh iyo bogagga bogga soo dega ee u beddelaya martida hoggaamiyeyaasha. U adeegso tifaftirahaaga dhibic-iyo-guji fudud si aad u abuurto bogag degitaan oo gaar ah, ama la qabsato sheybaar maktabaddeenna ballaaran. Samee silsilado bogag degitaan oo isku xiran si aad ugu abaabusho martida godad kala duwan. Ku wad wadashaqeyn dheeraad ah nuxurka websaydhka firfircoon ee isbeddelaya oo ku saleysan danaha martida iyo astaamaha. Si dhakhso leh u keen natiijooyinka adigoon codayn ama horumariyaha, iyo adigoon taaban boggaaga - laakiin kuwa doonaya xakamaynta wadarta, waxaad ku dari kartaa HTML-kaaga iyo lambarka CSS si aad u habeysid bogagga xitaa intaa ka sii badan.
Blogs - Ku bilaw bog daqiiqado daqiiqad leh blog-dhise iyo tifaftire nidaamkayaga otomatiga suuqgeynta. Naqshadeynta, maamul iyo daabac qoraallada si fudud. Samee wadashaqeyn kooxdaada dhexdeeda ah, ama sameyso astaamo si aad u soo dhaweyso baloogyada martida ah. Kordhi gaadhista waxyaabahaaga mawduucyada RSS emaylka ee si otomaatig ah ugu dira qoraallo cusub liisaskaaga dirista. Ka hel waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha aad ka kooban tahay aaladda warbaahinta bulshada ee u oggolaanaysa dadka isticmaala inay kula wadaagaan oo ay internetka kugula socdaan. U adeegso aaladaha qalabaynta suuqgeynta ee loo yaqaan 'SharpSpring' si aad ula socoto dadka soo booqda, si aad u ogaato waxa ku jira ee sida ugu fiican wax u qabta, iyo bartilmaameedka qoraallada si loo kordhiyo beddelaadda.
Falanqaynta Suuqgeynta - Ku sameyso go'aanno muhiim ah xog sax ah oo la xiriirta. Xullo mitirrada ugu muhiimsan olole kasta iyo farriin kasta, ka dibna soo saar warbixinno qaas ah oo dib loogu eego waxqabadkaaga. Faham dhamaadka-ilaa-dhamaadka ROI oo lasocodka ilaha hogaanka - xitaa khad la'aanta. La wadaag macluumaadka muhiimka ah kooxdaada, macaamiishaada, iyo macaamiisha bandhig la akhrin karo oo la heli karo.
Isdhexgalka - Ku xirmaan boqolaal bixiyeyaasha barnaamijka saddexaad ee leh SharpSpring's APIs iyo isdhexgalka Zapier. Xogta ku xir nidaamintaada suuqgeynta nidaamka CRM, ku habo nidaamkaaga maareynta maadooyinkaaga mid cusbooneysiin ah, iskuna dar foomamka websaydhka ah ee hooyo iyo saddexaad. Runtii SharpSpring iskaa u samee adiga oo dib u magacawida emayllada, ogeysiisyada, warbixinnada, iyo xitaa barnaamijka laftiisa. Ku kaydi xogta barxadeena sirta ah, aaminka ah, ee la qaadi karo.
Warbaahinta bulshada - Ka gudub daabicista, jadwalka, iyo kormeerka. Is-dhexgalka bulshada u rogo wada hadal macno leh oo dhaliya iibsi isla markaana ka muuqda warbixinnada suuqgeyntaada. SharpSpring Social wuxuu kuu soo bandhigayaa dhamaan astaamaha aad ka fileyso xalinta maareynta bulshada, oo ay weheliso aaladaha beddelka ee xoogga leh waxaad ka heli kartaa oo keliya barxadda suuq-geynta oo isku dhafan. Kiciye qulqulaya shaqooyinka tooska ah iyo dhibcaha hogaaminta bulshada ee ku saleysan isdhexgalka, ilaha, danaha iyo waxyaabo kale oo badan. Cabir dhammaadka-dhamaadka ROI ee ololeyaasha suuq-geynta isku-dhafan oo muujiya qiimaha dadaalkaaga warbaahinta bulshada.
Soo hel Dembi SharpSpring ah
Daah-: Waxaan nahay xulufada SharpSpring oo waxay adeegsanayaan xiriiriyeyaal xiriir la leh qodobkan.
Tags: APImadal blogmaamulka xiriirka macaamiishaEmail Marketingfoomamkafalanqaynta suuqgeyntasuuq-geynta suuqasuuq geynta suuq geyntafiiqanfiiqan bulshadamadal warbaahinta bulshadaaqoonsiga martida
Leadfeeder: Aqoonso oo Dhibcaha Shirkadaha B2B ee booqda bartaada
Muujinta Joogtada ah ee Domainka (Regex) Tilmaamaha WordPress